काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या ५७३ – Sajha Pati
नेपाली / English
जडीबुटी र सिनामंगल क्षेत्रमा सेवामा समर्प्रीत ट्राफिक दाजुभाईहरुलाई मास्क र हेन्ड स्यानेटाईजर बितरण::बाढिपहिरोबाट प्रभाबितहरुलाई लायन्स क्लबको सहयोग::बाढिपहिरोबाट प्रभाबित दोलखा जिल्लाका बासिन्दाहरुलाई लायन्स क्लबको सहयोग::कोरोना प्रभावित अमेरिकीहरूका लागि कोरोनाको खोप मुफ्त::नविकरण शुल्क पचास प्रतिशत छुट गर्न प्रेस नेपालको महासंघसँग माग::जनता समाजबादी पार्टी जिल्ला समिती मुगु समायोजन सम्पन्न::बेंगलुरुमा फेसबुक पोस्टका कारण भएको हिंसामा तीन व्यक्तिको मृत्यु, ६० प्रहरी घाइते::रौतहटका क्षेत्रमा संक्रमण समुदायमा फैलिने त्रास::आनलाईन व्यवसायका नाममा दराज आनलाईन सेवाको ठगी::काठमाडौं महानगरले प्रवाह गर्ने अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवा भाद्र १० गतेसम्म बन्द हुने
scroll • समाचार • स्वास्थ्य
काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या ५७३
काठमाडौं । उपत्यका क्षेत्रभित्र ५७३ व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । अघि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले भन्नुभयो – काठमाडौँ जस्तो जनघनत्व बढी भएको ठाउँमा संक्रमण फैलियो भने जटिल समस्या आउन सक्छ । सबैले सचेत हुनर्ुपर्छ । पछिल्लो समय भारतबाट कामका सिलसिलामा उपत्यका प्रवेश गर्नेहरुमा संक्रमणको जोखिम उच्च देखिएको भन्दै डा. पाण्डेले भन्नुभयो – यसरी आउने व्यक्ति सम्बन्धि सूचना स्थानीय तहलाई आवश्यक छ । यस्ता व्यक्ति आएको थाहा पाए अनिवार्य रुपमा १४ दिन क्वारेन्टीनमा बस्न लगाउनु पर्ने आग्रह गर्नुभयो ।
जोखिममा रहेकालाई परीक्षणको दायरामा ल्याउनु पर्छ । यसो भयो भने महामारी नियन्त्रण गर्न धेरै सहज हुने उहाँको भनाइ छ । मास्कको प्रयोग नगर्ने, गरे पनि उचित तरिकाले प्रयोग नगर्ने प्रवृत्तिले संक्रमणको जोखिम बढेको छ । मास्कको उचित प्रयोग भयो भने ७० प्रतिशत वढी संक्रमणको जोखिमबाट बच्न सकिन्छ ।
डा. पाण्डेकाअनुसार उपत्यकामा देखिएका कोरोनाका संक्रमितमध्ये ३५० जना स्थानीय हुनुहुन्छ । उहाँहरुमध्ये २१० जना पुरुष र बाँकी महिला हुनुहुन्छ ।
scroll • फोटो ग्यालरी
जडीबुटी र सिनामंगल क्षेत्रमा सेवामा समर्प्रीत ट्राफिक दाजुभाईहरुलाई मास्क र हेन्ड स्यानेटाईजर बितरण
बाढिपहिरोबाट प्रभाबितहरुलाई लायन्स क्लबको सहयोग
scroll • लायन्स गतिविधि
बाढिपहिरोबाट प्रभाबित दोलखा जिल्लाका बासिन्दाहरुलाई लायन्स क्लबको सहयोग
गाईजात्रालगायत पर्व मनाउँदा महामारीको बिषम परिस्थिति बुझन महानगरबासीलाई आग्रह
भत्तामा मात्र ४ करोड रुपैयाँ र इन्धनसहित अन्य प्रशासनिक खर्च कटौतीबाट करीब ४ करोड गरी करीब ८ करोड रुपैयाँ जोगाउँछौं : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्याल
Live updates: Senate adjourns...
Hard weeks are ahead of millions of Americans as the Senate adjourns for the rest of August without...
अध्यक्ष : एल के शाह
सम्पादक : याेगेन्द्र प्रताप शाही
संवाददाता : डि बि कुँवर
फेसबुकमा लाईक गर्नुहोस्
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं: ८६८/०७५-७६
सम्पर्क नं: ९८५१०९९०३४
सर्वाधिकार सुनिश्चित © 2020.